Wayszọ 4 iji egwu YouTube nwebiisinka na iwu 2021 - AudienceGain Ltd
Wayszọ 4 iji jiri YouTube nwebiisinka na iwu 2021
Ebe ọ bụ na 2019, Egwu YouTube nwere ikike aghọwo okwu na-adọta mmasị dị ukwuu. Ndị na-emepụta ọdịnaya nwere ike ịgbakwunye, dochie, wepu abụ na vidiyo ha, yana ọbụlagodi vidiyo ndị ọzọ n'ọnọdụ ụfọdụ. Mana omume ndị a gbagwojuru anya dịka ha metụtara ọtụtụ iwu nwebisiinka ndị ọzọ.
YouTube nwebisiinka iwu iwu.
Kedu otu usoro nwebisiinka nke YouTube si arụ ọrụ
Njirimara ọdịnaya na ndị nwe nwebisiinka
NJ ọdịnaya bụ sọftụwia pụrụ iche nke Youtube wuru iji nyere ndị nwe ọdịnaya aka chọta mbipụta ọrụ ha na YouTube. Usoro a na-efu ihe karịrị 100 nde dollar iji mepụta ma melite.
Ọdịnaya NJ ọdịnaya na-achọpụta ngwaahịa ndị yiri ya.
Ebumnuche bụ isi nke Njirimara Ọdịnaya bụ iji nye onye ọ bụla usoro iwu eji eme ihe. Ndị nwe ha nwere ikike ịkekọrịta echiche ha site na vidiyo fan ma ọ bụ wetuo ụdị nke nwere ike ịgụnye ọdịnaya mbụ nke ndị ọzọ. Ndị YouTube nwebisiinka nke nwebisiinka dịkwa n'okpuru ogo njikwa ID Jikwaa.
Nke a bụ otu ID ọdịnaya si arụ ọrụ:
Ndị nwe ọdịnaya na-enye faịlụ ọdịyo ma ọ bụ nke anya na-egosipụta ọrụ ha. Ọdịnaya Njirimara ID na-emepụta ihe a maara dị ka "akara mkpịsị aka" site na faịlụ ndị a. A na-edebe mkpịsị aka a na nchekwa data nke ọtụtụ narị afọ nke ọdịnaya na ọdịyo.
Njirimara ọdịnaya na-enyocha vidiyo na YouTube megide mkpịsị aka a iji hụ ma enwere egwuregwu nke ọdịyo, vidiyo, egwu egwu.
Ọ bụrụ na achọtara egwuregwu ahụ site na ikpuchi ma ọ bụ iitatingomi, onye nwe ọdịnaya nwere nhọrọ atọ:
Gbochie vidiyo nke dabara na ọdịnaya ha.
Sochie data ndị na-ekiri iji nweta nchịkọta zuru ezu, dịka mba ebe ọdịnaya ha na-ewu ewu.
Usoro Njirimara Ọdịnaya pụtara na ọtụtụ ndị nwe ọdịnaya anaghị adabere na usoro ndetu na mbata. Agbanyeghị, ha ka nwere ike họrọ ịnye ọkwa gbasara mbata iji wepu vidiyo nke ọ bụla.
Ikike nwebisiinka na nwebisiinka
Iji Ọdịnaya NJ, ọ na-adị mfe maka ndị okike ịgbagha ikike nwebisiinka. Ọ na - eme mgbe Nchọpụta Ọdịnaya YouTube na - achọpụta vidiyo vidiyo na - agbakwunye na nke ọzọ. Ndị nwe nwebiisinka na-ahapụkarị ihe ndị a na-ekwu na ha na-arụ ọrụ na YouTube na mgbasa ozi. Ọ bụrụ na nzọrọ mechara bụrụ ihe na-abaghị uru, onye okike agaghị efu. Enweta ego ọ bụla akwụpụtara n'oge usoro esemokwu ahụ iche iche, wee hapụ ya ka ọ dabara na ya ozugbo arụmarụ esemokwu ahụ.
Ikike nwebisiinka na-enyere aka nyocha YouTube nwebisiinka nwebisinka.
Nwebisiinka nwebisiinkaNa-egosi mgbe onye nwebisiinka rịọrọ ka vidiyo nke emebi iwu nwebisiinka ka ewepụ ya na YouTube kpamkpam. Onye nnata ikike nwebisiinka 3 ga-akwụsị Nweta ego YouTube. Nwebisiinka Nwepu na-agwụ mgbe ụbọchị 90 gasịrị, omume ihichapụ vidiyo enweghị ike ibelata oge a.
Egwu nke a na-akwụghị ụgwọ na nwebisiinka
Dabere na ikike ọgụgụ isi na nwebisiinka, ndị na-emepụta ọdịnaya nwere ike iji nnwere onwe eze (RF) na egwu na-enweghị ikike na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ ikike. O yiri ka ọ bụ n'efu, mana ọ bụghị.
YouTube nwebiisinka music dị mkpa.
Iji na-ọzọ zuru ezu, mgbe na-arụ ọrụ na a eze-free music saịtị, ị nwere ike họrọ iji ụfọdụ egwu dị ka ndabere na gị video. Ndị na-ede egwú ga-enweta ụgwọ ọrụ, ụlọ ọrụ na-enye gị egwu ga-eburu ibu ọrụ ahụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na vidio gị pụtara n'ihu ọha na telivishọn ma ọ bụ na netwọk, onye mgbasa ozi ga-akwụ ndị nwe ya ụgwọ onye nwe ya na onye nhazi.
Restdị Mmachi YouTube
Abụ ọ bụla na-eso iwu egwu YouTube nwere ụfọdụ mmachi nke ndị nwe ọdịnaya setịpụrụ. Usoro ndị a na-adịkarị mma na egwu mbụ na egwu ọ bụla nke onye ọ bụla ọzọ:
Egwu a ga-adabere na ọnọdụ ya. Ikwesiri ilebara anya na ntinye ụfọdụ, dika A na-ahụ anya n'ụwa niile, A gaghị ahụ ya na mba 74 or Enwere ike ịhụ ebe niile belụsọ mba 2, wdg, iji zere eziokwu na enwere ike igbochi vidiyo gị ma ọ bụrụ na ọ naghị eju afọ. Ikwesiri ime nnyocha ya nke ọma iji mara mba ndị enweghị ike imeghe vidiyo gị.
Mgbe ị hụrụ ihe edeturu: Mgbasa ozi nwere ike ịpụta ma ọ bụ okwu ụfọdụ yiri ya na vidiyo gị, nke pụtara na onye nwe egwu etinyela mgbasa ozi n'ihi na ị jirila ọdịnaya ahụ. Ọ bụ n'usoro iwu atumatu Ọdịnaya. Ma ọ bụrụ na ịchọta ya iwe ebe ọ bụ na ndị nwe egwu na-etinye ego na ọrụ gị, ịnwere ike ịhọrọ abụ ndị ọzọ na-enweghị ikike nwebisiinka.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị hụ ịdọ aka na ntị na akara Egwu a adịghị ka iji ya na vidiyo Youtube gị, ị nwere ike ịghọta na ịnweghị ike iji ya na vidiyo gị. Ndị nwebisiinka nwere ike ịgbanwe iwu agbakwunye na egwu ha n'oge ọ bụla.
Nke ahụ bụ ihe ị kwesịrị ịma tupu ịhọrọ abụ na vidiyo gị.
Etu esi eji egwu na vidiyo YouTube na iwu
Ọ na-apụta na iji egwu nwebiisinka na YouTube adịghị mfe n'ihi nnyonye anya nke ID ọdịnaya na nwebiisinka. Agbanyeghị, ọ pụtara ìhè ịghọta uru na mbọ nke onye mepụtara ọdịnaya dị iche iche.
YouTubers adịghị mkpa ichegbu onwe n'ihi na e nwere ụzọ 4 dị mma iji jiri egwu nwebiisinka na vidiyo gị n'ụzọ iwu.
Jiri Audio Library nke YouTube Studio
Agbanyeghị na YouTube nwere ikike dị ukwuu na ikike nwebisiinka nke iji egwu, YouTube Studio ka na-enye nhọrọ iji nyere ndị na-emepụta ọdịnaya aka ịmeghe ihe okike ha ma nọrọ n'iwu n'otu oge.
Audio Library awade ọtụtụ free music nhọrọ.
Kwụpụ 1:Banye na gị Akaụntụ YouTube na laptọọpụ gị ma ọ bụ kọmputa gị.
nzọụkwụ 2: Chọta YouTube Studio na elu aka nri.
nzọụkwụ 3: Họrọ Ọ́bá Akwụkwọ. E nwere a dịgasị iche iche nke songs na i nwere ike tinye gị video, dị ka ewu ewu azụmahịa songs, nsonaazụ ụda, wdg
Kwụpụ 4: ahọrọ Egwu Efu taabụ ma ọ bụ Mmetụta ụda taabụ. Nwere ike chọọ site na aha, ọnọdụ, oge, ụdị, ngwa, wdg.
Kwụpụ 5: Gee ntị ntinye ntinye iji họrọ egwu ịchọrọ ịgbakwunye na vidiyo gị. Lezienụ anya na mgbochi. You nwere ike izute okwu ndị a: Nweere onwe gị iji abụ a na vidiyo gị ọ bụla, nke pụtara na ị nwere ike ịgbakwunye egwu dịka ịchọrọ. Mana ọ bụrụ n'ịhụ ahịrị: Nweere onwe gị iji abụ a na vidiyo gị ọ bụla, mana ị ga-etinye ihe ndị a na nkọwa vidiyo gị; nke a putara na ị ga - akwado nkwenye nke akụkụ ị na - eji. Mgbe ahụ, budata egwu ịchọrọ.
Ọ nwere ike ịbụ ụzọ dị mfe ma dị irè iji zaa ajụjụ a: Kedu ka YouTubers si eji egwu nwebiisinka?
Jiri ngalaba ọha na-eme ihe
Maka egwu ochie ndị tufuru ikike ikike ọgụgụ isi ha ma ka nwee mmetụta ụfọdụ na ọha na eze, ịnwere ike iji ha n'efu na enweghị njikwa ọ bụla, yana weebụsaịtị weebụsaịtị nke Public Domain ga-enyere gị aka nke ukwuu.
Ọrụ Ntanetị nke Ọha.
Na United States, ngalaba ọha nwere abụ ọ bụla ma ọ bụ ọrụ egwu ọ bụla edepụtara na ma ọ bụ tupu 1922. Mana ọ ka mma ma ọ bụrụ na ị ga-eme nyocha na ya n'ihi na ozi dị na weebụsaịtị anaghị adị mma mgbe niile. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị bụghị otu n'ime ụmụ amaala US, ị kwesịrị ịlele iwu nwebiisinka na mba gị iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere ojiji nke egwu mpaghara ọha.
Rịọ maka ikike ma ọ bụ ikike n’aka onye nwe nwebiisinka
Ọ bụrụ na egwu na-aga ugbu a na-aga ịrịa ma ịchọrọ iji ha na vidiyo gị iji dọta ndị na-ege ntị karị, yabụ kedu ka ị ga - esi nwebisiinka egwu na YouTube? Azịza ya na-arịọ maka ikike n'aka onye ji ikike nwebisiinka.
Na-arịọ maka ikike ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji egwu nwebisiinka YouTube.
Nke a bụ usoro 5 ị ga-achọ ịma mgbe ị natara ikike maka iji ọrụ nwebiisinka:
nzọụkwụ 1: Chọpụta ma ngwaahịa a ga-achọ ikikere n'aka onye nrụpụta ma ọ bụ na ọ bụghị.
nzọụkwụ 2: Ghọta onye nwe ọdịnaya mbụ.
nzọụkwụ 3: Ghọta ikike ndị achọrọ.
nzọụkwụ 4: Soro onye nwe ya kwurita ma kparita uka banyere ugwo ya.
nzọụkwụ 5: Banye akwụkwọ nkwekọrịta iwu.
Somefọdụ tepụ nwere ike ịgụnye ma nwebisiinka na ụda ndekọ abụ ahụ. Ya mere, ị kwesịrị ịkpachara anya inwe akwụkwọ ikike abụọ.
Iji ikikere nke Creative Commons
YouTube na-enye ikikere Creative Commons maka ndị YouTubers chọrọ ka ọrụ ha nwee ikike ijigharị ọrụ ndị ọzọ. Can nwere ike iji ikikere a maka ebumnuche azụmahịa na nke na-abụghị nke azụmahịa.
Creative Commons na-akwado gị iji egwu na vidiyo YouTube na iwu.
Mgbe ị na-eme a Vidiyo Youtube iji ọdịnaya Creative Commons, aha onye nwe ihe okike ga-etinye na vidiyo gị na-akpaghị aka. Kwesịrị ịgbaso usoro ndị a n'okpuru iji chọta ọdịnaya dị na Creative Commons na YouTube:
Kwụpụ 1: Pịnye ederede ọchụchọ na nyocha ọchụchọ.
Kwụpụ 2: Họrọ Iyo nhọrọ.
Nzọụkwụ 3: Pịa na Creative Commons n'okpuru atụmatụ.
Nzọụkwụ 4: vidiyo niile nwere ikikere Creative Commons ga-apụta, mgbe ahụ ị nwere ike ịmalite ịhọrọ.
Abovezọ ndị a dị n'elu nke iji egwu egwu nwebisiinka YouTube niile nwere uru ha. Yabụ na ị nweere onwe ịhọrọ nke kachasị adaba na gị.
Fọdụ ajụjụ a na-ahụkarị metụtara otu esi eji egwu nwebisiinka na YouTube iwu
Kedu ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na enwetaghị gị ikike?
Enwere ụfọdụ nsogbu siri ike na vidiyo gị nke ị nwere ike ihu. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnweta ikike nwebisiinka megide ọwa gị, ma ọ bụ na ụda vidiyo gị ga-emechi. Nwere ike ịga ma ọ bụ kpọpụ gị na ọnọdụ ọjọọ. Karịa nke ahụ, ịnwere ike ịnwe nsogbu iwu gbasara ego na mmezi dị oke ọnụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ikike doro anya n'aka onye nwe ọdịnaya.
Ego ole bụ ego ikikere abụ?
Ikike nwebisiinka ga-efu nnukwu ego iji debanye aha iji ya. Abụ nke onye na-ese ihe na-enweghị atụ nwere ike ịbụ ihe ruru $ 100, ebe abụ nke onye ama ama ama ama ma ọ bụ nnukwu aha nwere ike efu puku dollar ole na ole. Kama, ụfọdụ akwụkwọ ikike nwere ike ịgba gị ụgwọ dabere na pacenti ndị ahịa ahụ. Ihe ikwesiri ime bụ iji nwayọ gụọ usoro ikikere iji mata ihe ị na-eme.
Enwere m ike iji ọdịnaya site na iTunes, CD, ma ọ bụ DVD m zụtara?
Mba, ihe a megidere iwu nwebisiinka n'ihi na naanị ịzụrụ ya dị ka onye ahịa, ị nweghị ikike iji ya dị ka ọdịnaya na ngwaahịa gị. Ọbụlagodi na ị nyere onye nwe nwebiisinka otuto, ọ pụtaghị na ịnwe nkwekọrịta gọọmentị site n'aka onye nwe ya.
Enwere m ike iji ọdịnaya ahụ ọfụma ma ọ bụrụhaala na m na-enye ndị nwe nwebisiinka otuto?
N'ezie ọ dịghị. Maka na ịnye onye nwere ọdịnaya ahụ apụtaghị na ị ga-enwe ikike iji ya n'efu. Jide n'aka na ị gbasoro ọdịnaya niile na-enweghị akwụkwọ tupu ibugo vidiyo na YouTube. Biko gụọ usoro ojiji nke egwu ọ bụla tupu i jiri ya na ngwaahịa gị.
Kedu ihe dị iche na nwebiisinka na nzuzo?
Nwebisiinka na nzuzo dị mkpa mana ha dị iche. Ọ bụrụ na ị gosi na vidiyo, ọ pụtaghị na vidiyo ahụ bụ nke gị dị ka nwebisiinka. Okike ọdịnaya na video captor bụ nwebisiinka nke ya.
Ma ọ bụrụ na ndị enyi gị ma ọ bụ ndị enyi gị, na-enweghị ikike gị, bulite vidiyo ahụ ị nwere na ndekọ na ị hụrụ na ọ megidere nzuzo gị, ị nwere ikike itinye akwụkwọ mkpesa nzuzo. Nke ahụ bụ nzuzo onwe onye.
Iji egwu nwebisiinka nke YouTube na - agbakwunye uru na ọdịnaya gị, na - adọta ọtụtụ ndị mmadụ ileta ọwa gị. Ọ nwere ike ịbụ ụzọ iji nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ nke Oge nche elekere 4,000 na ndị debanyere aha 1,000.
Agbanyeghị, ị ga - ahụ nke ọma na YouTube bụ ikpo okwu na - akpata ego, ọ na - enye sistemụ njikwa siri ike gbasara ojiji na ikike okike n'otu oge. Iji jiri egwu na vidiyo YouTube na iwu anaghịzi adị mfe dịka NJ ọdịnaya na-emewanyewanye kwa ụbọchị.
Ọ bụ mgbe ahụ ka ịchọrọ ịchọ azịza dị irè karị, ị nwere ike ịchọta otu na Ndị na-ege ntị. Anyị na-enye ọrụ kachasị mma iji bulie ọwa gị yana otu ndị na-akwado nkwado iji nyere gị aka 24/7. Ya mere, debanye aha ozugbo iji nweta ọrụ anyị dị iche.